Indlela ejwayeleke kakhulu ngoba mushroom isobho nge amakhowe
Ukuze abalandeli abaningi ukudla okwehl 'esiphundu mushroom isobho kuyinto uju. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukupheka ngisho ke ehlobo, ngisho ebusika. Amakhowe zingathengwa esitolo, kodwa ungakwazi silungiselele ikusasa kule sizini amakhowe. Abantu abaningi bayazi iresiphi of mushroom isobho nge amakhowe, futhi abanye cha. Kodwa laba bantu futhi lesi sihloko kulotshiwe.
Ukuze silungiselele lokhu isobho, kudingeka Thenga kakhulu izithako ezidingekayo. Okokuqala - lokhu isikhunta (amakhowe), ngesisekelo isobho, 400-500 amagremu, amakhowe bouillon cube, a amakhanda ambalwa anyanisi, namazambane ambalwa isanqante amaphakathi, onion, parsley kanye ibhotela kancane.
Okokuqala, yilungiselele anyanisi. Beka epanini on the anyanisi oqoshiwe futhi isanqante, okuyinto waxoshwa on a grater emihle. Manje yonke le ngoba nanhlanu imizuzu sikadali. Ngo parallel banikelwe emlilweni ukubeka esitsheni ngamanzi bese wengeza ezinye usawoti, futhi sibheke phambili lapho sizokwazi yeka amazambane. Futhi kumele kwehliswe lapho amanzi amathumba. Indlela Yokuthola mushroom isobho nge amakhowe ingaqukatha hhayi kuphela amakhowe, kodwa futhi inkukhu, noshizi.
Kwathi amakhowe. Okokuqala, ezibekwe amanzi futhi unike ukuma imizuzu eminingana, kuyobe sekuba i kulula ukususa ukungcola. Ngaphezu kwalokho kuhlanzwe futhi Imi ingenkulu, tincetu mncane. Mushroom Xuba imifino olungiselelwe, wokhele, ibangele ngezikhathi ezithile. Kancane pokipyatit e capacitance ngokungeza bouillon cube, okuyinto pre-cwilisa emanzini. Qhubeka ukupheka imizuzu embalwa ngaphezulu.
Noma ubani kwaba iresiphi mushroom isobho nge amakhowe, mhlawumbe uholwe okukhethwayo kwakho, ungakwazi ukwengeza okuthile eyabo. Ngokulandelayo, ikhasi amazambane kanye uthathe ke, njengenjwayelo, kodwa kungcono e cubes ezincane. Emanzini abilayo. Siphawula isikhathi. Ngemva kwemizuzu engaba ngu nanhlanu kuya amabili epanini uthele imifino yethu iyisitshulu. Manje ukupheka isobho kuze kuphekwe ngokugcwele. Futhi ngenkathi ukupheka isikhashana, imifino ukupheka. Anyanisi kanye dill, parsley ungakwazi, usike, futhi phambi uvala isitofu, engeza isobho kakade kuqedile.
Ngaphandle ezivamile isobho amakhowe kungenziwa kuphekwe isobho nge amakhowe futhi inkukhu. Ngenxa yalesi isobho, sidinga: 400-800 g amakhowe - amakhowe, ekwenza lokho naphezu kwamuphi umthamo kuzodingeka; Amakhowe angaba kokubili fresh futhi eqandisiwe. Inkukhu webele noma webele, utamatisi ezimbili noma ezintathu; izaqathe kanye anyanisi - konke endaweni eyodwa. Ngaphandle - ubisi, usawoti, pepper kanye soy sauce. Ukuze uhlanganise bazodinga blender.
Senza konke ngokulinganisa. Kuze inkukhu webele noma, ugeze amakhowe futhi yeka kubo emanzini. Ungakhohlwa usawoti emanzini ekuqaleni. Cook. Ukugcina isikhathi, qala ikhasi anyanisi, ugeze utamatisi kanye izaqathi. Ngemva kwalokho, ukusika kubo ngengxenye ngo, baphonsa epanini umhluzi. Ngemuva kwemizuzu engu-15-20, lapho inkukhu iphekwe, wafaka amakhowe wakhe. Kumele kube ngemva kokuba kuphekelwa esitsheni ehlukile, kugeze kahle. Khona-ke, ukushaya okuqukethwe blender pan ukuze puree. Gcwalisa ubisi ngokushesha nje thumba isobho, cisha.
Ngaphezu kwalokhu isobho, kukhona isobho nge amakhowe noshizi. Lokhu dish kwanelisa kakhulu futhi ewusizo, ngaphandle nje kokuba ukulungele akunzima. Ukuze wenze lokhu isobho, sidinga: ukhilimu ushizi - 200 amagremu, isigamu ikhilo amazambane, amafutha yemifino, pepper, usawoti, futhi timphawu eziyisisekelo - amakhowe. Badinga 500 amagremu.
Amazambane uthathe cubes, noma njengenjwayelo, ngokubona kwakho; ukuhlanza anyanisi bese nquma kakhulu. Epanini amanzi abilayo yeka amazambane futhi ushiye ukupheka on ukushisa low. Khona-ke fake ukusika amakhowe. Ngesikhathi umnsalo gazinga kuso. Ungakhohlwa engeza usawoti kanye pepper ukunambitha. Epanini namazambane noshizi cwilisa, ibangele kuze kube iza ziyoncibilika ngokuphelele. Ngemva kwalokho, uthele okuqukethwe pan ku epanini upheke kuze kuphekwe.
Indlela Yokuthola mushroom isobho nge amakhowe, kanye nezinye SUPN zokupheka uyashintsha, okuyinto Ngokubona kwakho uzokwazi ngcono.
Bean isobho nge inyama - skusno, ewusizo, okunempilo
A iresiphi elula ukhilimu isobho
Izifo eziphathelene nenhliziyo kabusha isidumbu sowesifazane phakathi menopause
Sitshele ukuthi kungani esiswini ubuhlungu esesikhathini?
Kostomarovo, Voronezh esifundeni. Imephu Voronezh esifundeni
Yenza amathoyizi "kapitoshki" ngezandla zabo
Yini ingase ikumangaze Brazil? Manaus - edolobheni, ivula iminyango ukuze ehlathini lase-Amazon
Imidlalo Online nemidlalo ekuxhumaneni nomphakathi
I-hussar enamaphiko. Ama-hussars asePoland anephiko. Umlando wezembatho nezinhlamvu
I-Atlantic Ocean nezici zayo
Izidlo kusukela inkukhu izinhliziyo